Bit By Bit - Mifehy - 6.4.4 Fanajana ny Lalàna sy ny Public Interest
Ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest nanitatra ny fitsipiky ny Beneficence mihoatra ny fikarohana manokana mpandray anjara mba ahitana ny mpifarimbona manan- danja.
Ny fitsipika fahefatra sady farany izay afaka mitari-dalana ny fomba fisainany dia fanajana ny lalàna sy ny Public Interest. Izany fitsipika izany dia avy amin'ny Menlo Report, ka noho izany dia mety ho tsy dia tsara fantatry ny mpikaroka ara-tsosialy. Ny Menlo Report nandresy lahatra fa ny fitsipiky ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest dia tanteraka ao amin'ny fitsipiky ny Beneficence, fa ny Menlo Report milaza mazava fa mendrika hodinihina. Tao an-tsaiko, ny fomba tsara indrindra mba mieritreritra momba izany fitsipika izany dia ny hoe Beneficence mitady hifantoka amin'ny mpandray anjara sy ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest mazava mamporisika mpikaroka mba maka fomba fijery midadasika kokoa sy ahitana ny lalàna eo amin'ny fiheverana. Tamin'ny taona Analog fikarohana-toy ny nentin-drazana sy ny laboratoara fanadihadiana fanandramana-mpikaroka dia inoana ny nahy handika ny lalàna. Ao amin'ny fikarohana anaty aterineto, izany, indrisy, tena tsy marina.
Ao amin'ny Menlo Report, fanajana ny lalàna sy ny Public Interest manana singa roa miavaka tsara: (1) Compliance sy ny (2) Transparency-monina Accountability. Fanajana dia midika fa mpikaroka miezaka mamantatra sy mankatò lalàna ilaina, ny fifanarahana, sy teny amin'ny fanompoana. , Ohatra, dia midika fanajana ny mpikaroka mihevitra fa ny fikikisana ny votoatin'ny tranonkala iray dia tokony hamaky sy handinika ny teny-of-service fifanarahana izany tranonkala. Mety, na izany aza, dia toe-javatra izay dia azo atao ny mandika ny teny amin'ny fanompoana. Ohatra, nisy fotoana na Verizon sy AT & T nanana teny ny fanompoana izay nanakana ny mpanjifa avy amin'ny manakiana azy ireo (Vaccaro et al. 2015) . Ny mpikaroka dia tsy tokony mandeha ho azy toy izany voafatotry ny teny-of-service fifanarahana. Ny tena tsara, raha mandika ny mpikaroka teny amin'ny fanompoana fifanarahana, dia tokony manazava ny fanapahan-keviny ampahibemaso (ohatra, Soeller et al. (2016) ). Nefa, izany dia mety hampiharihary ny mpikaroka fisokafana ho ara-dalàna koa atahorana. Any Etazonia, ohatra, ny Computer hosoka sy ny fanararaotana Act mahatonga azy tsy ara-dalàna ny mandika teny ny fanompoana fifanarahana (Sandvig and Karahalios 2016) .
Ankoatra izany, ny mangarahara-monina andraikitra dia midika fa mpikaroka tokony ho mazava tsara momba ny tanjona, fomba, sy ny vokatra rehetra dingana ny dingana fikarohana, ary ny handray andraikitra noho ny zavatra nataony. Fomba iray hafa mba hieritreritra ny mangarahara io ara-tompon'andraikitra dia ny miezaka mba hisorohana ny fikarohana fiaraha-monina avy manao zavatra ao amin'ny miafina. Izany mangarahara-monina tompon'andraikitra mahatonga malalaka kokoa ny andraikitra ho an'ny fikarohana fiaraha-monina sy ny vahoaka ao amin'ny etika adihevitra, izay no zava-dehibe ho an'ny etika sy azo ampiharina ny antony.
Raha mampihatra ny fitsipiky ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest ireo fampianarana telo mampiseho ny fahasarotana sasantsasany mpikaroka miatrika raha ny amin'ny lalàna. Ohatra, Grimmelmann (2015) dia nilaza fa areti-mifindra-pihetseham-po mety ho tsy ara-dalàna eo ambanin'ny lalàna ny Faritanin 'Maryland. Indrindra indrindra, Maryland House volavolan-dalàna 917, dia nandeha tamin'ny 2002, dia miitatra Common Fitsipika fiarovana rehetra fikarohana natao tany Maryland, tsy miankina amin'ny famatsiam-bola loharano (Tadidio fa maro ny manam-pahaizana mino fa pihetseham-po areti-mifindra dia tsy manaiky ny Common Fitsipika ambanin'ny Federal Lalàna, satria dia nitarika ao amin'ny Facebook, ny andrim-panjakana izay tsy mandray vola avy amin'ny fikarohana ny Masoivoho Amerikana). Na dia izany aza, manam-pahaizana sasany mino fa Maryland House Bill 917 no tena lalàm-panorenana [ Grimmelmann (2015) ; p. 237-238]. Manao ara-tsosialy mpikaroka dia tsy mpitsara, ka noho izany dia tsy ampy fitaovana mba hahatakatra sy hijery ny constitutionnalité ny lalàna rehetra 50 US firenena. Ireo fahasarotan'ny dia trotraka amin'ny tetikasa iraisam-pirenena. Encore, ohatra, mandray anjara ireo mpandray anjara avy amin'ny firenena 170, izay mahatonga fanajana ara-dalàna mampino sarotra. Ho valin'ny tsy mazava ara-dalàna ny tontolo iainana, mpikaroka tokony hitandrina mba maintsy fahatelo-antoko etika famerenana ny asany, toy ny samy loharanom-torohevitra momba ny ara-dalàna fepetra sy ho toy ny fiarovana manokana raha tsy nahy ny fikarohana dia tsy ara-dalàna.
Etsy an-danin'izany, telo fanadihadiana namoaka ny vokatra amin'ny akademika gazety manampy ny mangarahara-monina andraikitra. Raha ny marina, dia namoaka-pihetseham-po areti-mifindra fidirana misokatra izany ny fikarohana fiaraha-monina sy ny vahoaka kokoa dia nampahafantatra-rehefa ny zava-misy momba ny famolavolana-sy ny vokatry ny fikarohana. Fitsipi-ankihibe iray mba hijery ny mangarahara ara-tompon'andraikitra dia ny manontany tena hoe: fa hahazo aina aho raha ny fomba fikarohana dia nosoratana momba eo amin'ny pejy ny gazety tanàna an-trano? Raha tsy misy ny valiny, izay famantarana mahery izay nanaovana ny fikarohana mila fanovana.
Ho famaranana, ny Belmont Report sy Menlo Report soso-kevitra efatra fitsipika izay azo ampiasaina mba hanombana fikarohana: Ny fanajana ny olona, ​​Beneficence, Fahamarinana, sy ny fanajana ny lalàna sy ny Public Interest. Raha mampihatra ireo fitsipika efatra amin'ny fampiharana dia tsy tsotra foana, ary afaka mitaky sarotra ny fandanjalanjana. Ohatra, rehefa manapa-kevitra na ny debrief mpandray anjara avy amin'ny areti-mifindra-pihetseham-po, fanajana ny olona mety handrisika fiatrehana ny fahatairana kosa Beneficence mety hanakivy debrief (raha ny fiatrehana ny fahatairana mihitsy no hanao ratsy). Tsy misy fomba mandeha ho azy ny mampifandanja ireo fitsipika mifaninana, fa amin'ny ho faran'izay kely, ny fitsipika efatra hanampy hanazava ny varotra-offs, milaza fiovana ny fikarohana teti-dratsiny, ka hahafahan'ny mpikaroka mba hanazava ny Fandresen-dahatra amin'ny tsirairay sy ny daholobe.